Ngathi | Yiwu Sungnan Imp & Exp Co., Ltd.
Siyinkampani esekwe kakuhle, ngawo onke amaphepha afunekayo kurhulumente kunye nelayisensi yokuthumela ngaphandle. Sizinikezele ukuzisa abathengi bethu ngenkonzo esemgangathweni kunye nokuthengwa kwempahla kwivenkile yasimahla.
Ngeminyaka yokusebenza, sinezinto ezingaphezulu kwe-100 ezihlangeneyo ezisebenzisanayo, ababoneleli abathembekileyo kunye nezinto ezingaphezu kwe-1000 ezikhethiweyo ezifanelekileyo ezifakwe ngemifanekiso kunye neenkcukacha ezicacileyo. Zonke iimveliso esiziphetheyo zithengiswa kwilizwe jikelele kwaye zamkelwe.
Yintoni eyenza uSUNGNAN ahlule phakathi kwesihlwele
Inkonzo eyenzelwe wena kunye nexabiso elongeziweyo
Iqela lolawulo lomgangatho olomeleleyo
Ukuqokelelwa kweMveliso rhoqo
Imodeli yethu yeshishini isekwe ekwaneliseni iimfuno zabathengi bethu abahlukeneyo kwihlabathi liphela, kunye nokubonelela ngezisombululo ezenzelwe intengiso nganye. Ii-odolo nokuba zincinci okanye zikhulu kakhulu zamkelekile kwaye ziya kuqhutywa nzulu nangobungcali. Abasebenzi bethu bayakuvuyela ukubiza kwakho imibuzo, ukuphatha iodolo, iimfuno zokushicilela kunye nokufumana imveliso entsha.
Sinobunzulu bokuqonda ukubaluleka komgangatho wemveliso. Iqela lethu le-QA lizinikele ekuqinisekiseni, ngexesha lokuvelisa okanye xa iimpahla zisiza kugcina indawo yethu, ngokubhekisele ekusebenzeni, ukupakisha, ukubhala iilebhile, ukuprinta, ubungakanani, ukuthotyelwa komgangatho wamazwe aphesheya ngokwe-AQL okanye iimfuno ezithile zomthengi.
Iqela lethu lokuthenga lijonge ngokungathandabuzekiyo izinto ezintsha nezinomtsalane, eziza kukugcina usisilinganiselo phakathi kwendawo yakho yentengiso.Kwaye sineqela lethu loyilo elinamava eminyaka yokuqikelela, ukuthengisa, abacebisi ngefashoni, izitayile, njl.
I-SUNGNAN yamkela inkqubo ezenzekelayo, yolawulo lwekhompyuter. Ngale nkqubo, ubonelelo lwethu kunye nentengiselwano nganye ilawulwa kakuhle, ilawulwa ngokufanelekileyo kwaye ilungelelaniswe. Ikwenza ukuba imveliso yethu yokulandelelwa kwabathengi kunye nenqanaba lokuhanjiswa kwezinto ezi-odolwe.